ကားဝယ်မယ်ဆိုရင် ဘယ်အချက်တွေကိုအဓိကထားစဉ်းစားကြမလဲ ?
ကားဝယ်ယူတယ်ဆိုတာ ကလေးကစားတာမဟုတ်တာကြောင့် အဝယ်မမှားအောင်သေချာစဉ်းစားပြီး ဝယ်ယူကြဖို့လိုပါတယ်။ ဘာအတွက်ပဲဝယ်ဝယ် ကားဝယ်မယ်ဆိုရင်အောက်ပါအချက်တွေကို အဓိကထားစဉ်းစားပြီးမှဝယ်ယူဖို့ အကြံပြုပါရစေ။
ကားဝယ်ဖို့အတွက် ငွေဘယ်လောက်ထိသုံးဖို့ရည်မှန်းထားလည်းဆိုတာကို အရင်ဆုံးဆုံးဖြတ်ဖို့ လိုပါတယ်။ ဒါမှသာ ကိုယ်သုံးဖို့မှန်းထားတဲ့ ငွေပမာဏနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ ကားအမျိုးအစားတွေထဲကအကောင်းဆုံးဖြစ်မယ့် ကားကိုရွေးချယ်နိုင်မှာပါ။
ဝယ်လိုက်တဲ့ကားကို ဘယ်နေရာတွေမှာအဓိကသုံးမှာလဲဆိုတာကို စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ထားဖို့လိုပါတယ်။ မြို့တွင်းပဲစီးမှာလား၊ မိသားစုနဲ့အတူတူခရီးတွေထွက်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိလား စသည်ဖြင့်ကိုယ်သုံးမယ့် ရည်ရွယ်ချက်ကိုသိမှ ကိုက်ညီမယ့်ကားကိုရွေးချယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ်ဝယ်မယ့်ကားက အပိုပစ္စည်း(Spare Part )တွေ လွယ်လွယ်ကူကူ ရနိုင်ရဲ့လားဆိုတာကလည်း မဖြစ်မနေ စဉ်းစားရမယ့် အချက်ပါ။ Spare Part တွေရဲ့ဈေးကရောဘယ်လိုရှိလဲ။ ဈေးကြီးမှာလား။ နိုင်ငံခြားကမှာရင် ဘယ်လောက်ကြာနိုင်လဲ ဆိုတာတွေစဉ်းစားထားမှ ခရီးသွားတဲ့အခါမျိုးတွေမှာ ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်ဆောင်နိုင်မှာပါ။
ကားစစ်ဆေးဖို့၊ ပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်လာရင် အလွယ်တကူ၊ ကုန်ကျစရိတ်သက်သက်သာသာနဲ့ စစ်ဆေးပြင်ဆင်နိုင်ရဲ့လား ဆိုတာကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားရပါမယ်။ ဥပမာ Nissan လိုကားမျိုးတွေက Free service check နဲ့ warranty မပြည့်ခင်မှာ တာဝန်ယူမှုအပြည့်အစုံရှိပါတယ်။ ကိုယ်ဝယ်မယ့်ကားက အဲဒီလိုမျိုးအခွင့်အရေးတွေရှိလား။ sevice officer တွေက ဘယ်လိုဝန်ဆောင်မှုပေးလဲစတာတွေကို စဉ်းစားဖို့လိုပါမယ်။
ကားရဲ့ quality ကဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာ test driving လုပ်ပြီးပြီလား။ Indicator and Wind Shield Wiper တွေစုံလား၊ လမ်းမျိုးစုံမောင်းနိုင်ရဲ့လား။ Interior function ၊ radio၊ air con တွေကို စစ်ကြည့့်ပြီးပြီလား ဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေကိုလည်းစဉ်းစားထားရပါမယ်။
မဝယ်ခင်မှာ Test driving လုပ်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Juntion Square မှာ ဇွန်လ၊ ၂၂ နဲ့ ၂၃ ရက်နေ့တွေမှာ ကျင်းပမယ့် Nissan Show မှာ Nissan Navara Plus လို့လူသိများတဲ့ အသစ်ထွက် Double Cab Pickup အမျိုးအစားနှင့် အားလုံးအသစ် ၇-ယောက်စီး SUV အမျိုးအစား Nissan Terra တို့ကိုမောင်းနှင်နိုင်မယ့်အခွင့်အရေးရှိနေပါတယ်။
သင်ရောစမ်းသပ်မောင်းနှင်ကြည့်ဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီလား ????? အောက်ပါ Link မှာအခုပဲစာရင်းပေးသွင်းလိုက်ပါ။
စာရင်းပေးသွင်းရန် => https://forms.gle/5D9GSLzbCGPbdGRr6